» गोलभेडा खेति गर्ने तरिका (पुरै पढ्नुहोस्)
गोलभेडा खेति गर्ने तरिका (पुरै पढ्नुहोस्)
५ आश्विन २०७८, मंगलवार १४:५५
(Licopersicon esculentum), Solanaceae परिवारमा पर्नि न्यानो माैसममा फल्नी तरकारी हो । यसको सुरुवातमा पेरु भन्नी सहरबाट उत्पादन भएको थियो । यसलाई घरेलु उत्पादन चाहि मेक्सिको सहर बाट सुरु हुँदै विश्व भर फैलिएको छ। भिटामिन र मिनरलको मुख्य स्रोत हो । गोलभेडा जसलाई सलादको रुपमा नि खाने गर्छन् । यसलाई poor mans orange
गोलभेडा एक न्यानो मौसम बाली हो जसलाई २१°c-२५°c तापक्रम चाहिने गर्छ उत्पादनका लागि । गोलभेडाका बोटहरुले शीत र धेरै आद्रता सहन सक्दैन । यसलाई निम्न देखि मध्यम वर्षात्को अावश्यकता पर्दछ।
गोलभेडा उत्पादनका लागि मलिलो , राम्रो नाली भएको , जैविक पर्दाथ धेरै भएको माटो उपयोगी हुन्छ र उत्पादन बढ्दो हुन्छ । छिटो उत्पादन हुने गोलभेडाको लागि चाहिँ बलौटे दोमट र जैविक पर्दाथ धेरै भएको माटो उत्तम हुन्छ धेरै उत्पादनका लागि । गोलभेडा ६.०- ७.० पि. एज उत्तम हुन्छ । बीउ को मात्रा :- ४००- ५०० ग्राम प्रती हेक्टर । नर्सरी ब्यवस्थापन:-
हामीलाई २२५ वर्ग मिटर अावश्यक पर्छ १ हेक्टर जमिनको लागि । ७.५ मिटर लामो , १ मिटर चौडाइ र १०-१५ सेनटि मिटर उचाई चाहिन्छ । राम्रोसँग विघटित मललाई मिलाउनु होस् । राम्रो र स्वास्थ बेर्नाका लागि बिउलाई ढुसिनासक जस्तै कप्तन (captan ) वा केरसन (cerasan) वा थिरम (थिरम )( २ ग्राम प्रति केजि) सँग राम्रोसँग मिसाउन पर्छ । त्यस्तैगरि बीउ बेडलाई अाधि लिटर ४०% formalin प्रती मिटर माटो । त्यसपछि त्यस ठाउलाई पोलिथिनले छोपनु होस् ।
जमिनलाई पहिला मजाले ४-५ चोटि जोत्नु होस् र नचाहिने झार ढुङ्गा जस्ता वस्तु रहित बनाउनुस् जमिनलाइ।
फागुन , चैततिर ( गर्मी समयमा ) होचा जातका बेर्ना सार्ने हो भने ड्याङ नउठाईकन बेर्ना सार्ने तर अग्ला जातका विरुवाहरुलाई वर्षाको समयमा ( असार – साउन ) सार्दा निकासको लागि अग्लो ड्याङ ( करिब १५ से.मि ) उठाई बेर्ना सार्ने र साथै प्लास्टिकको छानो भएको घर निर्माण गर्दा राम्रो हुन्छ । होचा र ठिक्कको बोट हुने जातको लागि डयाङ देखि डयाङको दुरी ६० से. मि र बोट देखि बोटको दुरि ४५ से.मि अग्ला बोट डयाङ देखि डयाङको दुरि ७५ र बोट देखि बोटको दुरि ४५ से.मि
मल दिने मात्रा विभिन्न कारक जस्तै माटो , जातहरु , सिचाइ र मैसममा मध्य नजर हुन्छ । कम्पोस्ट मल १५०० केजि , युरिया ५ के.जि , डि.ए.पी ५के.जि , म्यूरेट अफपोटास ५ के.जि प्रती रोपनी हाल्नुहोस् जमिन बनाउदा खेरि ।पहिला एक तिहाइ भाग यूरिया हाल्नुहोस् र बाकि २० -२० दिनको फरकमा यूरिया हाल्नुस् बेर्नासार्नु को पछि ।
गोलभेडा लाई प्राप्त मात्रामा चिसाईपन चाहिन्छ । पहिलो सिचाई बेर्ना सार्नु पछि दिनु । गर्मीमा ३-४ दिनको अनतरमा पानी हाल्नुपर्छ र जाडोमा १०-१५ दिनको अनतर मा हाल्नु पर्छ । धेरै सिचाई गर्दा फल फुट्ने समस्या नि अाउने गर्छ ।
गोलभेडालाई थात्रो दिने
थाँत्रो दिइएको बोटबाट थाँत्रो नदिएको बोटबाट बढी उत्पादन हुने गर्छ । थाँत्रो वा बासको टेका प्लाष्टिकको डोरीको सहायताले दिन सकिन्छ । वर्षायाममा गरिने गोलभेडा खेतिका लागि थात्रो अनिवार्य हुन्छ ।
बाली टिप्ने समय
गोलभेडा कुन उद्देश्यमा प्रयोग गर्ने हो भन्नेमा भर पर्दछ ्अग्ला जात ७०-१०० दिनमा फल टिप्न लायक हुन्छ र होचा जातहरु ७० दिनमा हुन्छ । परिपक्व हरियो फलको टुप्पा भागको रङ्ग हल्का हरियोबाट पहेँलो हरियो रङ्गमा परिवर्तन भएको हुन्छ र लामो दुरिका लागि नि यो अवस्थामा टिप्ने गरिन्छ ।
यो अवस्थामा फलको बाहिरी सतहको ४ भागको ३ भाग गुलाबी रंगको हुन्छ । गुलाबी फलहरु पनि स्थानीय बजारमा बेच्न सकिन्छ ।
यो अवस्थामा फलको रङ्ग पुरै रातो हुन्छ र फल कडा हुन्छ । राता कडा फल शस र अचार बनाउनको लागि टिपिन्छ
रातो धेरै पाकेको
यो अवस्थामा फल राता र गिला हुन्छन । यस्ता फल बीउ झिक्नको लागि मात्र टिप्न सकिन्छ ।
१ व्याक्टेरियल ओइलाउने रोग (Bacterial Wilt) :-
CO:- Pseudomonas solanacaerum
यो धेरै नै गम्भीर समस्या हो गोलभेडामा बालीमा , बोट अोइलाउनु अघि नै तल्लो पातहरु झर्छन र बोट पनि पुरै अोइलन्छ र पातहरु पनि पहिलो हुन्छ । यो माटोको समस्याको कारणले नि हुन्छ ।
-रोग सहने जात सृजना,गौरब,अर्का अलोक , लागाउने।
– सोलानेसी परिवारका बाली लगाएको जमिनमा गोलभेडा खेती नगर्ने।
– निमको केक , तेलको केकको प्रयोग गर्ने
२ डढुवा रोग (blight) :-
पातमा डढेको जस्तो लक्ष्ण देखिन्छ । शुरुमा पानीले भिजेको जस्तो हल्का खैरो हुन्छ र गाढा खैरो वा कालो रङ्गमा परिणत हुन्छ । अोसिलो अवस्थामा पातको तल्लो सतहमा सेतो ढूसी देखिन्छ र फलमा खैरा कालो दागहरु देखा पर्दछन् ।
रोगलागेको बोट, पराना बोटहरू र झारपात बटुली जलाउने र खेतवारी सफा सग्घु र राख्ने । रोग शरु हुने बेलादेखि कपर अक्सिक्लोराइड (ब्लाईटक्स ५०% WP) १.५ ग्राम र मेन्कोजेव ७५% WP (डाइथेनएम–४५)विषादी १.५ ग्राम मिलाई जम्मा ३ग्राम प्रति लीटर पानीमा मिसाएर ७–१० दिनको फरकमा ३–४ पटक बोट राम्ररी भिजिने गरी छर्कने । अथवा Chlorothalonil 75% WP (Diffence, Kaavach, Protector) १.५ ग्राम अथवा Propineb 70% WP (Antracol, Antragold, Ki Antra) ३ ग्राम प्रतिलिटर पानीमा मिसायर छर्कने ।
३ पात घुम्रिने रोग ( leaf curl virus)
रोग लागेको बोटका पातहरू घम्रिुएर माथितिर फर्कन्छ र पातहरू फिका पहेंलो र साना साना हन्छुन् । त्यस्तो रोग लागेको बोटहरूमा कम
फलु्ने वा फलै नलाग्ने पनि हुनसक्छ । यसबाहेक पातहरूमा गुज्मुजिएको लक्षण पनि देखा पर्दछन ।
रोग लागेको बोट देखा पर्नासाथ उखेलेर नष्ट गर्न पर्छ । यो रोग सेतो झिँगाबाट सर्ने हुनाले डाईमेथोएट (रोगर ३०% इ.सी.) कीटनाशक बिषादी १ मी.ली. प्रति लीटर पानीका दरले प्रयोग गरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्नि ।
४ जरामा गाँठा पर्ने (Root knot nematode)
बोट सानो र ख्याउटे भई बढ्न सक्दैन र पातहरू पहेंलिएर झर्न थाल्छ । त्यस्ता वोटको जरामा साना गिर्खाहरू बनेका हुन्छन्। जसले गर्दा पछि बोट ओइलाउँछ ।
अन्न बालीसँग घुम्ती बाली अपनाउने । खेतको खनजोत गहिरोसँग गर्ने । मुख्य बालीसँग सुर्यमखी, सयपत्री जस्ता फुलको बोटहरू रोप्ने ।
५ गोलभेडा पात खन्ने किरा (tomato lead minor Tuta absoluta )
यसले कलिलो फल बढी नष्ट गर्छ । लार्भाले पात, डाँठ, मुना र फल भित्र छेडेर क्षति गर्दछ ।
क्षतिग्रस्त पातलाई नियालेर हेर्दा सेतो झिल्ली भित्र लार्भा देख्न सकिन्छ । यो कीराको प्रकोप बढी भएमा परै पातहरु जलेर नष्ट भएको देख्न सकिन्छ ।
बत्तिको पासोको रुपमा प्रयोग वा टिएलएम ल्यूर फेरोमन ओटाटीट्रयाप वा स्टीकी ट्रयापमा प्रति रोपनी एउटा प्रयोग गर्ने । ब्यासिलस थुरिन्जीनेसीस कुस्टाकी –बीटी) १% डब्लुप्ी १–२ ग्राम प्रति लि. पानीमा सानो अवस्थाको लार्भा हँदा साँझ पख छर्कने । क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल १८.५% एससी ३ मिली प्रति १०लि. पानीमा राखी छर्कने । स्पिनोसाड ४५% एससी १ मिलि प्रति ३ लि. पानीमा राखी छर्कने ।